နောက်တစ်ခုက အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမား စံနှုန်း၊ လေ့ကျင့်မှု့ သင်တန်း စတာတွေကိုလည်း တိုးတက်လာမှု့နဲ့အတူ တွဲပြီးတော့ ရှိရမယ့် အချက်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ တိုးတက်လာပုံဟာ သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အကုန်လုံးကို ကော်ပီလုပ်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဂျပန်ဟာ ကော်ပီကို မူရင်းထက်ကောင်းအောင်၊ ပိုပြီးတိုးတက်လာအောင် ထွင်ကြတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ဈေးကွက်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ဂျပန်ထုတ်ပစ္စည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ impression ရှိပြီးတော့ တရုတ်ထုတ်ပစ္စည်းဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဟင်.. ဒီစက်ကတော့ကွာ ခဏလောက်ပဲ အသုံးခံမှာပါလို့ ထင်ရလဲ? ဒါဟာ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အလုပ်သမား စွမ်းအားစုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှု့နဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ၊ စနစ်နဲ့ သတ်ဆိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု့၊ သေချာမှု့စံနှုန်း စတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လည်း ခုကထည်းက ဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးမယ်၊ ဘယ်လို စံနှုန်းထားကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်မယ် စတာတွေကို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါပြီ။ မဟုတ်ရင် နောင်တစ်ချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည် ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တခြားနိုင်ငံတွေက မြင်ရင် နှာခေါင်းရှုံ သွားပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာ စက်ရုံကောင်းနေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး၊ စက်ရုံကို လည်ပတ်ပေးနေတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းမှသာ ထုတ်ကုန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ဂဟေ တစ်ချက်ဆော်လိုက်တဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု့ဟာ ဒီစက်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးကို စတင်ကိုယ်စားပြုသွားပါပြီ။ အဆိုပါဟဂေသားကို ချောမွေ့သွားအောင် Grinding လုပ်တဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု့ဟာ အဆိုပါစက်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးကို ကိုယ်စားပြုသွားပါပြီ။ ဒီလိုပဲ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတိုင်းရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု့၊ အရည်အသွေးဟာ ထိုထုတ်ကုန်ရဲ့ ကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကောင်းတိုင်း ထုတ်ကုန်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်းတွေ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဆင့်မှီမှီနဲ့ ကမ္ဘာကို ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု့ကို စနစ်ကျကျ မြှင့်တင်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်က ထင်မိပါတယ်။
Posted by AH at 7/31/2012 01:07:00 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! July 31, 2012 at 6:59 PM
ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ပါ... မြန်မာကို ကမ္ဘာ့အဆင်မီနိုင်ငံ အဖြစ် မြင်ချင်မိတာ.. တစ်နေ့နေ့ပေါ့လေ.. မျှော်လင့်မိပါတယ်..
မြတ်နိူးသူ(MUFL) July 31, 2012 at 9:02 PM